Indlela yokuBhalisa - Isikolo soLwimi oluPhakathi, iCambridge
Malunga nesikolo sethu
Umsebenzi kunye neNkqubo yoLuntu
Iimpahla zemiSebenzi yokhetho
Ukudibana neqela lakho
Iikhosi esinikela ngazo
Iikhosi zexesha leNxalenye
Hlola izinga lakho lesiNgesi
Ulwazi lwe-Visa yase-UK
Ifom yeFomily Registration Form
Ukuhlawula iimali okanye ukufaka idiphozi
Xhumana okanye usihlawule
Hlawula imali okanye idiphozi
Gqibezela Ifom yobhaliso kwi-Intanethi kwaye isicelo sakho siya kuthunyelwa esikolweni OR khuphela uze ugcwalise ifom kwaye uyithumele kuthi nge-imeyile, thumela okanye ukuzise kumntu kwi-Ofisi yeSikolo.
Ukuhlawula idiphozithi (ikhosi kunye neendleko zokuhlala kwi-1 iveki kunye nemali yokubhuka yokuhlala) kwaye siya kubhala ikhosi yakho kwaye silungise indawo yokuhlala.
Siya kuqinisekisa ikhosi yakho kunye neendawo zokuhlala xa sifumana idiphozithi yakho kwaye sikuthumelele incwadi ye-Acceptance. Abafundi abangengabo base-EU baya kufuna isiqinisekiso sokufumana iVisa yabafundi base-UK. Ulwazi olungaphezulu lufumaneka kwi Ikhasi leNgcaciso yeVisa.
Zonke ukukhanselwa kufuneka zibhaliswe.
Ukuba ukhansela iiveki ezimbini okanye ngaphezulu ngaphambi kokuqala kwekhosi, siya kubuya yonke imirhumo ngaphandle kweediphozithi.
Ukuba ukhansela ngaphantsi kweeveki ezimbini ngaphambi kokuba kuqaliswe ikhosi siya kubuya i-50% yazo zonke iirhafu.
Ukuba isicelo sakho seVisa yabafundi base-UK asiphumelelanga siya kubuya yonke imirhumo ngaphandle kwekhosi kunye neendleko zokuhlala, emva kokufumana iSaziso soKwenqatshelwa kweVisa.
Asibuyiseli nayiphi na imali xa ukhansela emva kokuqala kwekhosi.
Nceda uye 'Ukuhlawula iimali okanye ukufaka idiphozi'
Khuphela yethu incwadana
Jonga incwadana yethu - nqakraza ukukhuphela
Isikolo soLwimi oluPhakathi, iCambridge
IYard Yard Centre
Ifowuni: + 44 (0) 1223 502004
© 2017 School Language Language, iCambridge